Global Voices teny Malagasy · 12 Oktobra 2018
Tantara tamin'ny 12 Oktobra 2018
Azia Atsinanana12 Oktobra 2018
‘Ny fiarako no hafatrao': Mifanamby amin'ny tanora hamoron-javatra avy amin'ny tsy misy ilay Afghana mpamorona zava-baovao
Azia Afovoany sy Kaokazy12 Oktobra 2018
"Atombohy fotsiny ny asanao. Ataovy miaraka amin'izay hanananao ankehitriny ny asanao. Fotoana izao hanombohana."
Fomba fijery avy ao Riyadh – Jeans Saodiana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana12 Oktobra 2018
Tantanin'i Ahmed, mpianatra ho farmasiana ao Riyadh, Arabia Saodita, ny "Saudi Jeans",bilaogy rohy izay mitovitovy kely amin'ny Scripting News, raha mba nonina tany Afovoany Atsinanana i Dave Winer ary mamaky gazety Arabo am-polony isa-maraina.
Kambodza12 Oktobra 2018
Navotsotry Ny Tajikistana Ilay Mpitoroka Saingy Mbola Manaraka Ihany Ny Fanamelohana
Nanao ny asany tokoa ilay fanentanana nampiasàna ny tenifototra #FreeKhayrullo (Avotsory i Khayrullo) ka nampihemotra ny governemanta. Ankehitriny, tsy amin-tahotra no nilazan'i Mirsaidov fa hanao fampakarana io fanamelohana azy io izy.
Ny malaza ao amin'ny tontolon'ny bilaogy Toniziana
Natao tamin'ny asabotsy 15 Aprily ny fihaonan'ny bilaogera Toniziana faha-12, izay nanamarika ny taona manontolo ny fihaonana. Marobe tsy mbola nisy toy izany ireo bilaogera tonga tao, teo amin'ny 35 teo izy ireo, ary mihoatra ireo tranainy ny isan'ny endrika vaovao. MMM, Marsawi (FR) sy Bouzguelif (FR) manoratra momba izany.
Endrika vaovao ao amin'ny tondro bridgeblog
Mediam-bahoaka12 Oktobra 2018
Vao haingana aho no nampahafantarina ny hevitra "mpamboly ny wiki ", ireo olona izay mikarakara ny wikis, manafoana ny spam, manamboatra ny format sy ny fitsipi-pitenenana, ary amin'ny ankapobeny manadio ny toerana.